Mamiriro Ekushandisa - Network maRadio
0 € 0 zvinhu
musha / Mamiriro Ekushandisa
Ruzivo runotevera chibvumirano chinoshanda kune vese vatengi veNetwork-Radios.com pakati peavo vanowana masevhisi uye zvigadzirwa zvinotengeswa pawww.Network-Radios.com uye Mazikeen OÜ (Network-Radios.com). Mitemo neMamiriro zvichashanda kune vese vanoshanyira www.Network-Radios.com uye/kana kutenga zviri pamutemo pawebhusaiti. Ruzivo rwako ruchachengetwa uye kushandiswa nenzira yakakodzera zvinoenderana neGDPR.
NETWORK-RADIOS.COM KONZANO YOTENGESWA
Chibvumirano Chekutengesa inoumbwa pakati peNetwork-Radios.com uye Iwe (Mutengi) kana uchinge wapedza uye kuendesa fomu yemagetsi yekushandisa kuburikidza newebsite yedu, unenge uchibvumirana neMitemo neMitemo inotevera uye urikupa chipo chekutenga zvinhu kubva Mazikeen OÜ. Kubvuma kwedu kuchipo chako kunozongoonekwa sekwakazara panguva yatinotumira e-mail yekusimbisa yekutumira kana kana SMS ine ruzivo rwakafanana yatumirwa kwauri, pane dzimwe nguva inogona kunge iri nyaya yekuti kupedzwa ndiko kana zvinhu zvawakaraira. zvinotumirwa, chero mamiriro ezvinhu anotanga kuitika. Kana nokuda kwechikonzero chipi nechipi odha yako yakarambwa tisati tabvuma kupa kwako uye kubhadhara kwatorwa, kudzoserwa kwakakwana kuchaitwa pakarepo. Chero zvinhu zviri pahurongwa hwakafanana izvo zvatisina kusimbisa mukutumira e-mail yekusimbisa kana SMS isina kutumirwa kwauri haisi chikamu chechibvumirano chinosunga pakati pako newe. Mazikeen OÜ.
1.1 Zera Rakabatana Kutengesa
Yese mirairo yakapihwa nevaya vari pasi pemakore gumi nemasere ekuberekwa inofanirwa kuve nemvumo yemubereki kana muchengeti neruzivo rwunotevera rwakapihwa nemwana kuti riitwe nemvumo yemubereki kana muchengeti. Isu tinodawo muridzi wekadhi kuti avepo kuitira kuti ape ruzivo mune zviitiko apo munhu ari pasi pemakore gumi nemasere ari kuisa odha. Chibvumirano Chekutengesa chinongosimudzirwa kupa izvo zvambotaurwa zvasimudzirwa.
1.2 Kutengesa kusingatenderwe
Network-Radios.com ichaedza kugadzirisa odha dzose zvakanaka uye zvinobudirira, tikatenda kuti odha yakaiswa pasina muridzi wemakadhi / mvumo yevanobata account saka odha yacho ichaitwa kwechinguva ichimirira kujekeswa kweruzivo urwu - tarisa poindi 2.1 kuti uwane rumwe ruzivo. Muchiitiko icho odha inosimbiswa kubiridzira mupi wekubhadhara anozofonerwa uye chibvumirano chekutengesa chakabviswa.
2. KUGADZIRA odha NETWORK-RADIOS.COM - KUTENGA KUZADZISWA
Zvese zvekutengesa zvichatanga zvakananga kuburikidza newebsite yeNetwork-Radios.com, saiti ino ndiyo yega nzvimbo inofanirwa kupihwa kupihwa mvumo yekutengesa neNetwork-Radios.com uye zvinhu nemasevhisi anopiwa neNetwork-Radios.com (Mazikeen OÜ) zvicharatidzwa chete pane ino webhusaiti.
2.0.1 Network-Radios.com ichashambadza zvigadzirwa pane zvataurwa pamusoro peji rewebhu; zvigadzirwa zvichave nerondedzero chaiyo yezvinhu zviri kutengeswa zvinoenderana nevakagadziri zvakajairwa; Network-Radios.com haizozvidavirira kukanganisa kwevanhu maererano neruzivo rwechigadzirwa asi ichave nechokwadi chekuti chero matambudziko anokonzerwa nekuda kweizvi achagadziriswa uye kuti mutengi anodzoserwa zvakakodzera kana mubhadharo watotorwa kare. Zvigadzirwa zvemifananidzo ndezvekufananidzira chete uye zvinogona kusiyana neicho chaicho Chigadzirwa chaunogashira.
2.0.2 Zvigadzirwa zvese zvichave nechiratidzo chakajeka uye chakapfupika chestoko, Network-Radios.com inochengetera kodzero yekushandura iyi ruzivo rwemastock chero nguva panguva yekuodha Vatengi vaizobatika kana izvi zvikava nemhedzisiro pane yavo odha.
2.0.3 Nekuisa odha neNetwork-Radios.com urikuratidza kuti wakaverenga uye wabvumirana nemawebsite zvirevo nemamiriro uye uine kugona uye mvumo yekuita zvakarongeka.
2.0.4 Vatengi vese veNetwork-Radios.com vanozodikanwa kuti vaite account kuitira kuti vaenderere mberi nekutenga zvinhu kubva kune yedu webhusaiti.
2.0.5 Mitengo yose yakaratidzwa ndeyekupedzisira uye VAT haizowedzerwa nekuti zvigadzirwa zvinotumirwa zvakananga kubva kune vanogadzira kana vagoveri matura anowanikwa muHong Kong. Nezvakadai, zvemitero yemuno ingangobhadhariswa kana uchibvisa zvinhu kubva mutsika. Kana zvigadzirwa zvatumirwa neDHL, mutengi achabhadhara iyo fizi yetsika yakananga kune anotakura anotakura. Kana zvinhu zvacho zvatumirwa kuburikidza nePosta Services, iwe unofanirwa kubhadhara mari yemutero mune yepedyo post station inoshumira kero yako.
Kubhadhara kunoitwa uchishandisa iyo PayPal nzira yekubhadhara ichabhadharwa zvizere & nekukasira, zvisinei kuti odha yacho izere kana chikamu chakazadziswa pane yekutanga dhirivhari.
2.1 Order Chengetedzo
Kana iwe uchida kuti chinhu chako chiendeswe kukero iyo isina kunyoreswa kukadhi rechikwereti / rebhengi timu yedu yekuchengetedza ichabatana newe. Mune zvimwe zviitiko, isu tinoda kumwezve ruzivo rwekuchengetedza uye chitupa kuti chipiwe nemutengi uyo anozoda kutumira email ruzivo runodiwa kuchikwata chedu chekuchengetedza. Network-Radios.com inombokumbira rumwe ruzivo kuti ishandise kutenga, ruzivo urwu rwunozoongororwa neyedu nyanzvi yekuchengetedza timu uye ndokuparadzwa. Network-Radios.com inotongwa nehungwaru hwayo uye Network-Radios.com inochengetera kodzero yekuramba odha chero nguva panguva yekuraira kwacho. Rumwe ruzivo rwunotsanangurwa neumwe neumwe kuraira uye runogona kusiyana - Network-Radios.com inoda dzimwe nguva fomu yeID kusimbisa kero yevatengi uye nhoroondo yekubhadhara, dzimwe nguva Network-Radios.com inoda mutengi kuti ataure neyeanobhadhara kuti uwane rumwe ruzivo.
2.2 Nzira dzekubhadhara
Network-Radios.com parizvino inogamuchira nzira dzakasiyana siyana dzekubhadhara, imwe neimwe nzira yekubhadhara ichave inoenderana nechete odha yekuchengetedza macheki uye Network-Radios.com ichabvisa kodzero yekutora zvizere kubhadhara kwezvinhu zvakarairwa chero nguva panguva yekuraira maitiro. Nzira dzekubhadhara dziripo dzinotevera:
Kiredhiti Kadhi / Kiredhiti Kadhi (Visa, Visa Dhibhiti, Visa Electron, Maestro, MasterCard)
PayPal kubhadhara kuri kuwanikwa.
Network-Radios.com ichagara ichivavarira kuzadzisa kwako kuendesa zvinodiwa; isu tinoshandisa akasiyana siyana anoremekedzwa courier masevhisi uye tinogona kuendesa kunzvimbo zhinji pasina matambudziko. Wedu anotakura anotora zvinhu kubva kunzvimbo dzedu. Isu tinoshandisa yakanakisa courier yechiitiko chega chega, zvichibva pane kwairi kuenda, uremu uye saizi yepakeji.
Nguva dzese dzekutakura dzinotaurwa mumazuva ekushanda uye unoona kuti mune nyaya yekuendesa zuva rekushanda rinotorwa sezuva ripi neripi kunze kwekupera kwevhiki kana zororo reruzhinji. Chero kutenga kunotengwa pazuva risingashandisi kunongogadziriswa pane rinotevera rinowanikwa zuva rekushanda. Semuyenzaniso. Rinotevera rinoshanda zuva rekutumira odha rakaiswa Mugovera raizongogadziriswa paMuvhuro unotevera.
3.1 Kero yekutumira
Zvinhu zvinotumirwa kune yakataurwa dhirivhari kero yakapihwa nemutengi pane online fomu fomu. Kana kero yekuendesa ikasiyana nekero yeivhoisi, Mutengi anofanira kupa kero dzose kana achiisa odha. Pasuru yacho ichaendeswa kukero yekutakura yakanyanya kuratidzwa pafomu.
3.2 Yakundikana Kuendesa Kuedza
Muchiitiko chekutadza kuendesa, zvinoenderana nemamiriro uye mutakuri mutemo, Mutengi anogona kugamuchira tsamba yekupfuura kureva, "kufona kadhi" mubhokisi rake retsamba. Kana zvirokwazvo mutumwa akasiya tsamba, Mutengi achada kufonera anoitakura kuti aronge zuva idzva rekutakura. Kana Mutengi asingabate sevhisi yekambani chinhu chacho chinobva changoedzwa kuendesa zuva rinotevera rekushanda kusvika uye dzimwe nguva kupfuudza kuedza kwechipiri kwekutumira kunze kwemapakeji ePosta Services, zvinhu izvi zvinoda kuunganidzwa mushure mekutanga kwekuyedza kuyedza. Izvo zvakare zvinogona kuitika kuti Mutengi haawane yekufona kadhi mune iyi kesi. Ibasa reMutengi kuteedzera ake / maodha ake online neakapihwa ruzivo rwekutevera pane webhusaiti yevatakuri, kuitira kuti utarise ruzivo rwepakeji uye kuzivisa chero rekutakura kana Network-Radios.com vatengi vevashandisi ve chero nyaya nekukurumidza sezvazvinogona. Kana pasuru yacho ikasaedzwazve, kuunganidzwa kana kuendeswa kune uye / kana nemutengi iyo package inodzoserwa kuNetwork-Radios.com uko kuchave nemubhadharo wekudzosera.
3.3 Kunonoka Kununurwa
Dzimwe nguva pasuru haigone kuendeswa mukati menguva inotarisirwa mugove kana yakatarwa nguva yekuendesa yakapihwa nemutakuri uye / kana Network-Radios.com uye kunonoka kunowedzera kwenguva yakareba isu tinotarisira kuti Mutengi ataure ne Network-Radios.com kuitira kuvhura muvhunzo kuti uone panowanikwa chikamu, kureva kuti pasuru yacho inogona kurasikirwa / kubiwa / kushaikwa. Ndokumbirawo muone kuti mune nyaya yekuendesa zuva rekushanda rinotaridzwa sezuva chero ripi zvaro kunze kwekupera kwevhiki kana zororo reruzhinji.
3.4 Kurasika kwepasuru
Kana mamiriro ezvinhu akadaro akamuka, Network-Radios.com inomanikidzwa kuremekedza nguva-dzakatarwa nevatakuri maererano nekuzivisa kurasikirwa kwepakeji, kugadzirisa chikumbiro nemutumwa uyezve kudzorera izvo zvakatumirwa kana kutsiva chinhu icho mutengi. Nekudaro, Mutengi akasungirwawo kune imwechete nguva-mafuremu:
Kuti Network-Radios.com izivise zviri pamutemo chikamu chakarasika, Mutengi ane mazuva maviri ekuzivisa kurasikirwa kwepasuru kana kutanga kubva pazuva raakatambira tsamba yekusimbisa yekutumira. Kupfuura ino nguva yenguva, hapana chikumbiro chichagamuchirwa. Ndokumbira utarise kuti kune zvekutumirwa kune dzimwe nyika izvi zvichawedzerwa zvinoenderana nebasa rekutakura raunosarudza, tinoda kuziviswa mukati memazuva maviri ezuva rekufungidzirwa kwekuendesa. Kana pasuru ikaziviswa seyakarasika mukati menguva yakataurwa pamusoro apa, Network-Radios.com ichaenda kunyorera chikumbiro nemutakuri uye inogona kuzokumbira Mutengi kuti awedzere magwaro ekupedzisa kuumbwa kweiyo faira rezvinhu. Mutengi anozofanira kutumira iyo ruzivo nekukurumidza sezvazvinogona. Mhinduro yekupedzisira ine chekuita nezvikumbiro inopihwa nemutakuri mukati mevhiki imwe kusvika kumatatu. Hunhu hwekupindura hunogona kuve imwe yemhando mbiri: ingava pasuru yacho yawanikwa yobva yatumirwa kumashure kuMutengi nemaitiro akajairwa, kana pasuru yacho inonzi yaraswa nemutakuri uye Network-Radios.com inozivisa Mutengi. Mune ino kesi, uye zvinoenderana nezvido zvevatengi, Network-Radios.com inogona kuita rwechipiri kutumira kweodha kana kuenderera nekudzosera zvizere Mutengi kune iyo yakazara mari yakabhadharwa. Muchiitiko chekurasikirwa, Network-Radios.com ichatumira mutengi fomu reNon-Receipt Chiziviso, icho chinoshandiswa sechikamu chekuferefeta kwacho. Iyi fomu ichave chirevo chekusatambira uye inofanirwa kuferefeta uye / kana GPS data kuratidza kuti chinhu chaendeswa zvinobudirira kunzvimbo kwayo saka izvi zvichazoshandiswa sechikamu chemutemo kumunhu anenge achigamuchira. Izvi zvinogona kana hazvingasanganise kuferefetwa kwemapurisa uye hazvingogumira kune anotenga zvinhu asiwo munhu / vanhu vakasaina / vakagamuchira zvinhu panzvimbo yakatarwa yekuendesa. Ndokumbira kuti ubate timu yedu yebasa revatengi kuti ubvunze zvimwe nezve fomu iri kana paine chero zvinhu zvarasika. Nguva dzekupedza uye kutsiva dzinosiyana pane imwe nyaya kuenda kune imwe nyaya.
3.5 Risiti yepasuru
Kana zvinhu zvikaendeswa kuMutengi, iye kana iye achazobvunzwa kusaina izvo zvinhu sechibvumirano chekutambira. Kana pasuru ikauya pamwe kana kukuvara zvachose, kuchengetedza kweVatengi kunofanirwa kunyorwa pane yekutumira noti pamberi peanotakura. Pasina kuchengetwa kuchitaurwa, pasuru yacho inoonekwa seyakaunzwa mune yakanaka mamiriro uye hapana zvirevo zvinotevera kana zvichemo zvinogamuchirwa neNetwork-Radios.com.
Kana mutengi achida kuchengetedza nzira kumuridzi, iye / anofanirwa kunyora mugwaro rekunyora kunyoreri mukati memazuva matatu (zororo reruzhinji risina kubviswa) zvichitevera zuva rekutumirwa. Uku kuda kunofanirwa kutumirwa netsamba yakanyoreswa nefomu yekubvuma kutambirwa.
Chero pasuru isina kubvumidzwa iyo inodzoserwa kuNetwork-Radios.com inogona kudzoserwa kuMutengi chero vabhadhara mari yekuendesa. Panofanira kunge paine chero nyaya nepakeji ine chekuita nezviri mukati, zvisipo kana neimwe nzira isu tinofanirwa kuziviswa mukati memaawa makumi mana nemasere kubva panguva yekuendeswa kuti tione kuve nechokwadi kwechikumbiro ichi, zvikasadaro Network-Radios.com ingatadze kutora mamwe matanho .
3.6 Kunze kwenyika / Tsika
Mutengi anofanira kutarisa nezviremera zvemunyika mavo nezve mamiriro ekupinda kwezvinhu zvakarairwa. Ndiro Mutengi mutengi kuita kuzivisa kwakakodzera (s) uye / kana kubhadhara (s) kuzviremera zvakakodzera uye kana vakuru vakuru munyika yavo.
Mutengi anofanira kubvunza kuzviremera zvemunharaunda nezvemitemo yekuunza kana kushandisa masevhisi nezvinhu zvakarairwa Kana mutengi asingagamuchire kana kuramba kubhadhara mutero wekunze kana mabasa ipapo kuchaja 30% yeiyo invoice yese inozoshandisirwa mutengo wekudzoreredza uye kuendesa kwekutanga kwechinhu ichocho, mhosva dzinobviswa kubva kune vatengi kudzoreredzwa pakudzoka kwepakeji. Mutengi anofanira kuona kuti hunyanzvi hunotsanangurwa nemugadziri unoremekedza mutemo wenyika yavo.
Network-Radios.com haigone kuve nemhosva kana Mutengi asingaremekedze mutemo wenyika iyo zvinhu zvichaunzwa.
Network-Radios.com ichaona zvese zvinyorwa zvinofanirwa kupihwa neNetwork-Radios.com
4 NETWORK-RADIOS.COM KUDZIDZISA NEKUCHINJA MITI
Isu tinovimba kuti iwe uchave unofara nekutenga chero kwaunoita kubva kuNetwork-Radios.com. Nekudaro isu tinonzwisisa kuti dzimwe nguva zvinhu zvinogona kunge zvisina kutarisirwa uye kana ukashuva kudzorera chinhu, unogona kuzviita mukati menguva dzezviitiko nemamiriro akatsanangurwa pazasi.
4.1 Network-Radios.com Kureba Kutengesa Mitemo (Haishande kuB2B Kutengesa)
Zvese zvekutenga pamhepo zvinoenderana nemirau yekutengesa kure; izvi zvinobvumira Vatengi kutenga chinhu kubva pawebhusaiti yedu vobva vadzorera chinhu icho kana chisingazodiwa uye / kana kusatarisirwa kuti vadzorere zvizere mukati memazuva gumi nemana eKarenda ekugamuchira. Kugonesa izvi isu tinoda kuti chinhu chidzorerwe neuchapupu hwekutenga, mune inogadziriswa 'seyatsva' mamiriro uye zvinoenderana neNetwork-Radios.com inodzosa mutemo.
Kana iwe uchidzosera chigadzirwa, iwe unofanirwa kusimbisa yako odha nhamba kana kupa humbowo hwekutenga.
Kana isu tisingakwanise kuongorora humbowo hwako hwekutenga, tinodemba kuti hatizokwanisa kudzosera mari kana kuchinjanisa. Kodzero dzako dzepamutemo hadzina kubatika.
Kana iwe ukasarudza kudzorera chinhu, ndapota chengeta icho icho uchiri mumaoko ako. Ndokumbira udzore chigadzirwa chako chisina kushandiswa; neyepakutanga kurongedza, zvishongedzo uye emanyorerwo. Mapundu ekusimudzira anofanirwa kudzoreredzwa azere kuitira kuti izvi zvidzorerwe. Ona pazasi kuti ubviswe:
Kureba Kutengesa Mitemo kunonyatso kusiira zvinotevera: - Vhura zvigadzirwa zvevaraidzo (komputa software, mabhaisikopo, mimhanzi, mitambo yemavhidhiyo, memori makadhi uye maUSB) sezvo izvi zvichizonzi zvinoshandiswa;
- Zvigadzirwa zvakatengwa nechibvumirano chekunyorera (kunze kwekunge zvatengwa kure, kwaunofanira kutiudza nezve chinangwa chako chekudzoka mukati memazuva gumi nemana eKendendende)
- Nhare dzepamusoro-kumusoro;
- Zvinhu zvakarairwa kunyanya iwe (kureva kubva kumugadziri)
- Chero chero zvinhu zvataifanirwa kuchinjisa kuti zvienderane nezvinodiwa zvako zvekumisikidza (semuenzaniso zvinhu zvakaboorwa maburi kuburikidza nazvo). Muchiitiko chekuti masevhisi akapihwa chibvumirano chako nguva ino isati yakwana yekukanzura zuva reKarenda gumi nemana, unorasikirwa nekodzero dzako dzekudzima kubva panguva yaunopihwa masevhisi.
Kana iwe ukadzorera chinhu chakashandiswa, isu tinochengetera kodzero yekuramba kudzoserwa kana kudzikisa huwandu hwemari yakadzoserwa yezvinhu zvakadzorerwa izvo zvinoratidza humbowo hwekushandisa kupfuura kubata kunodiwa kuti uone kana zvinhu zvacho zviri kushanda. Kune zvese zvinhu zvakatengwa online uye zvodzoserwa mukati memazuva gumi nemana isu taizotarisira kuti zvinhu zvese zvinodzoserwa zvakagadziriswa 'sechitsva' mamiriro uye zvinhu zvacho hazvifanirwe kunge zvakashandiswa Izvi zvinoda zvigadzirwa zvechigadzirwa, kuputira uye zvemukati kuti zvive zvisina kumira. Isu tinonzwisisa kuti zvisimbiso zvebhokisi zvinoda kutyorwa kuti zviongorore chinhu asi isu tinokumbira kuti kuchengetwa kwakaringana uye kutariswa kutorwe kusakanganisa pasuru kana zvisimbiso zvabviswa. Kukura uko mutengi anogona kubata zvinhu zvakafanana neizvozvo kana ungave uchizviongorora muchitoro. Kana zvichidikanwa, kukanzurwa kunogona kuitwa kusangana nevatengi vedu masevhisi. Kudzoreredzwa kwemari dzese dzakagamuchirwa, kusanganisira iyo inobuda yekuendesa mutengo, mukati memazuva gumi nemana kukanzurwa kwechibvumirano chemasevhisi kana mukati memazuva gumi nemana ekugashira zvinhu kudzoserwa ichagadziriswa seyakajairwa. Kana iwe uchikwanisa kupa humbowo hwekudzoka usati wagamuchira izvo zvinhu zvadzorerwa, iwe unofanirwa kugamuchira kudzoserwa mukati memazuva gumi nemana ekutumira iwo humbowo. Panyaya yezvinhu zvisingadiwe, Network-Radios.com haizobhadhare mutengo wemubhadharo wepositi wakaitwa kudzosera zvinhu kwatiri.
Kana mutengi akaraira chigadzirwa uye achiregera nekuda kwekukanganisa kwake, chero mari yekudzoserwa ichatorerwa mari yemakadhi echikwereti inoenderana nekutengeserana.
DZIDZISA DZIDZO DZOKUDZIDZA: Mari dzese dzakanangana nekudzorera chinhu chinofanira kubhadharwa nemutengi. Itsika yakanaka yekuti mutengi anoisa inishuwarenzi pazvinhu uye oshandisa mutumwa anotendera kuteedzera kwepakeji. Hapana kudzoreredzwa kuchapihwa kudzamara zvinhu zvagamuchirwa mumamiriro akatsanangurwa pamusoro pekero inofanirwa kupihwa neNetwork-Radios.com vatengi masevhisi.
Iko kunogashira zvinhu zvakakanganisika kana kusakwanira chinangwa kana sekutsanangurwa, vatengi vanozove nekodzero dzakasiyana dzinofukidzwa neKudzoka pasi pemitemo yewarandi. Ibasa redu kukupa iwe izvo zvinhu zvinosangana nekodzero dzako dzevatengi. Iyi Policy haina kukanganisa kodzero dzako dzepamutemo.
4.2 MABHUKU EBASA NEZVIMWE
Kudzoka uye kuchinjana pane ese masevhisi masevhisi anoonekwa neanopa uye kumwe kukanzura kunogona kushanda. Chero nguva yekukanzura ichaiswa muchibvumirano chako neNetwork-Radios.com kana mupi wekunyorera, sezvazvinoshanda.
4.3 KUDZOKA KUNYANYA KANA KUCHINJA CHINHU
Kana iwe uchida kudzorera chinhu, ndapota tevera imwe yemaitiro pazasi:
4.3.1 Bata timu Yedu Yevatengi
Nzira yakapusa yekuronga kudzoka ndeyekutumira email yedu Vatengi Vebasa Chikwata
4.3.2 garandi Kugadzirisa / Tsiva
Iyi garandi haishande kune chero chakaremara muzvinhu zvinobva pazasi -
Kupfeka Kwakanaka & Kubvarura
Kuregeredza kunoitwa neMutengi kana chero wechitatu bato.
Kushandisa neimwe nzira kunze kwekurudzirwa naMugadziri
Kukundikana kutevedzera rairo dzaMugadziri
Chero shanduko kana gadziriso inoitwa pasina Vagadziri mvumo.
Iyi garandi kana vimbiso iri mukuwedzera kune ako kodzero dzevatengi. Zvese zvigadzirwa zvitsva zvinotengeswa neNetwork-Radios.com ichave neinenge-gore-gore rekugadzira warandi (kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira) iyo inoshanda kubva pazuva rekutakura. Ruzivo rwakazara rwetemu uye izvo zvakafukidzwa zvichave nebhuku rekuraira nechigadzirwa chako kana pane webhusaiti yevagadziri.
4.3.3 Network-Radios.com Fair Returns Policy
(Haishandiswe neB2B Kutengesa)
Network-Radios.com inoshanda yakafanira kudzoka mutemo. Izvi zvinobvumira vatengi vane chakakanganisika chinhu kuti vadzorere chinhu kwatiri kuti chigadziriswe, kutsiva kana mune dzimwe nguva kudzoserwa. Iyi bumbiro haina kukanganisa kana kusanganisa iyo 14 Karenda yezuva kure kure kutengesa mutemo mutemo.
Mutengi ane chishandiso chakakanganisika mukati menguva yewarandi anozove nekodzero yekudzoserwa chinhu chavo kuti chigadziriswe; Network-Radios.com inoda vatengi kuti vaone kuti kudzoka kwavo kunotenderwa nekambani yedu yebasa revatengi, izvi zvinoda kuti Mutengi atumire email kuchikwata cheVatengi vedu kuti vazive chikonzero chekudzoka uye chiito chinodiwa, mushure memazuva gumi nemana mhedzisiro yeizvi kudzoka kunobva kwave pakuziva kweCustomer service timu. Mushure mekudzoserwa kwave kubvumiranwa referensi yekudzoka inozopihwa uye iwe unozokurudzirwa maitiro ekudzosera chinhu icho kwatiri, zvese zvekutumira uye zvinodzosera ruzivo zvichapihwa neCustomer Services Team yedu. Chero kudzoka kunotumirwa kuNetwork-Radios.com pasina ruzivo kana mvumo yetimu yebasa revatengi inogona kurambwa. Network-Radios.com haizotora mutoro wezvinhu zvadzorerwa zvanga zvisina kukumbirwa nechikwata chedu chekudzoka kana kutengwa kubva kuNetwork-Radios.com, izvi zvinosanganisira SD makadhi / USB Tambo / Mhosva nezvimwe… Zvinhu izvi zvinogona kuparadzwa.
4.3.4 Kudzosera Zvigadzirwa kuNetwork-Radios.com mushure memazuva gumi nemana (KUTENDA)
Pano paNetwork-Radios.com isu tinogara tine hurombo kunzwa nezve chero matambudziko aungave uine nekutenga kwako. Kana kukanganisa kukaitika mukati memazuva gumi nemana ekutenga saka kudzoreredza kana kuchinjana kwaizowanikwa, kana chigadzirwa chako chikave chakakanganisika mushure memazuva gumi nemana chigadzirwa chako chinogona kuvharwa pasi penguva yemugadziri wemugadziri (Kazhinji kwenguva yemwedzi gumi nemaviri kana kupfuura). Mune zvese zviitiko apo chigadzirwa chinodzoserwa kuNetwork-Radios.com isu tinogara tichida kuongorora nekusimbisa nyaya yacho. Kana mhosho ikaitika mukati menguva yewarandi (mushure memazuva gumi nemana) yaibva yagadziriswa pasi pevagadziri vane mashoma mazwi ewarandi. Muzviitiko zvese iwe ungashuve kushanyira webhusaiti yemugadziri kana kutaura navo zvakananga, kazhinji vanogona kuzopa kugadzirisa matambudziko uye kutsigira nyaya yauinayo nechigadzirwa chako uye izvi zvinogona kukonzera kukurumidza kukurumidza kuita. Sezvo poindi yako yekutengesa, Network-Radios.com yaizogara ichikwanisa kubatsira mukudzoka kunzvimbo yedu uye isu tobva tazobata takanangana nemugadziri pachinzvimbo chako. Ndokumbira kuti muzive kuti zvinhu zvinodzoserwa zvakananga kwatiri zvinowana nguva yakareba yekutendeuka pane nekutaurirana nemugadziri zvakananga uye ndosaka tichikurudzira kubata nemugadziri pakutanga sezvo iwe ungadai uine dambudziko rakagadziriswa nekukurumidza nenzira iyoyo. Paunodzorera chako, (kana zvichibvira) uchafanirwa kuona kuti chakavhurwa uye hachina software yekuchengetedza inogona kutitadzisa kugona kuiwana. Kana mudziyo wacho wakakiiwa, wakaremara kana kuti usingaonekwi newaranti kavha paunoudzosa uye isu tikakupa imwe yekutsiva mudziyo, tinogona kuzobhadharisa iwe mutengo wakazara wechigadzirwa uye / kana kusagadzirisa kudzoreredzwa (kana zvichibvira): kudzorera zvinhu kuNetwork-Radios.com iwe zvakare unofanirwa kupa:
Zvese zvikamu zvekutanga
Chero zvishongedzo kana zvipo zvemahara
Zvitifiketi, zvinyorwa, uye kadhi rewarandi
Kavha (Bhokisi, Yemukati Kupakata nezvimwe…) Kana wadzoka neNetwork-Radios.com, ichipa izvi zviri mukati menguva yewarandi nematemu, chinhu chichaendeswa kuMugadziri kuti chiongororwe uye zvichiteerana nemhedzisiro yeichi chinotsiva (Mune zvimwe kesi ichi chingave chigadzirwa chinogadziridzwa chinhu) kana chinhu chakagadziriswa chinodzoserwa kumutengi.
Zvinhu zvese zvakadzorerwa zvinozogadziriswa neNetwork-Radios.com Vatengi Services pahungwaru hwavo uye vanozotarisirwa maererano nazvo; Network-Radios.com inoda kuti zvese zvirimo zvidzorerwe uye kuve mune yakanaka kune nyowani mamiriro muchiitiko chekuti kudzorerwa kwakabvumiranwa nenhengo yeNetwork-Radios.com Vatengi Services. Izvi zvinofanirwa kugara zvichitenderanwa vasati vadzoka. Kana chinhu chacho chadzoserwa kuNetwork-Radios.com zvakananga ipapo kudzoka kwaizorambwa kana kuteererwa nemitero yakabatana kana chinhu chikaratidza chero chiratidzo cheanotevera:
- Shanduko kumugadziri akajairwa marongero
- Kuedza kukanganisa zvigadzirwa zvinogadzira kana zvisimbiso kana software.
- Chero chero data remunhu pachikamu, rinobviswa kana kwete.
- Zvisimbiso pane software zvakaputswa
- Iyo kifaa ine isina-yakamisikidzwa pini (kuvhura) kodhi
- Mugadziri wemukati (Software) wabviswa / kubviswa
Izvo zvinhu zvine chishandiso hazvina kufukidzwa nevagadziri garandi
* Network-Radios.com haizotora mutoro wedata rakarasika semhedzisiro yekudzosera chishandiso chekutsiva / kugadzirisa kana kudzoreraKana kudzoka kwako kumugadziri kusingaenderane nemabatiro ehurongwa nemamiriro ezvinhu izvi zvinonzi kunze kwegandeti revagadziri. Network-Radios.com inozotadza kupa garandi yasara pachigadzirwa uye mubhadharo wekugadzirisa uye mutero wekutarisa unokwanisa kushandiswa nemugadziri uye / kana Network-Radios.com yeiri nebasa rekugadzirisa ramangwana. Iyi bumbiro haina kukanganisa kodzero dzako dzepamutemo.
4.3.5 Kudzosera Zvigadzirwa kuNetwork-Radios.com mushure memazuva gumi nemana (ASINA KUTENDA)
Pano paNetwork-Radios.com tinoda kuve nechokwadi chekuti unofara nekutenga kwako uye apo isu tisingagamuchire zvinhu zvisingadiwe kumashure mushure memazuva gumi nemana, tinogona kuzosara mune mamwe mamiriro. Taura nesu zvakananga kuti titaure nezvekudzoka kwako zvakare - info@Network-Radios.com
Ndokumbirawo muone kuti mune dzimwe nguva izvi zvinosanganisira muripo uri kuitirwa sevhisi iyi
Iyi bumbiro haina kukanganisa kodzero dzako dzepamutemo.
Mumamiriro ezvinhu apo kudzoka kwako kuri kunze kweanogadzira mazwi ewaranti mutero unogona kushanda mukugadzirisa uye / kana kudzoserwa kwezvigadzirwa, izvi mhosva zvinoshanduka uye zvinoenderana nemugadziri wega; mutengo unozopihwa kumutengi nenzira yakarongeka uye unozodikanwa kuti ubhadharwe kuitira kuti chinhu chakakanganisika chigadziriswe. Kana mutengi akasashuvira kubhadhara mari yekugadzirisa panenge paine zvese mari yekuongorora, zvakare yakatemwa nemugadziri, pamwe nemutengo wekudzosa; Mari yekudzosa inosanganisira zvese mutengo wekuti mugadziri adzosere chinhu kuNetwork-Radios.com pamwe nekukosha kweNetwork-Radios.com kutumira chinhu chacho kumutengi. Pamusoro pekupihwa kwequotti yekugadzirisa kwakashata nemugadziri, mutengi anozosungwa neanorambwa mazuva manomwe, kana kugadzirisa uye mutengo ukasabvumiranwa mukati memazuva manomwe kubva pakugadziriswa quote Network-Radios.com ichave nechokwadi chechinhu inodzoserwa kumutengi nemitengo yambotaurwa iri kushanda. Chero kugadziriswa kunoitwa pachinhu pasina ruzivo kana kupihwa mvumo yeNetwork-Radios.com uye mugadziri anobva angobvisa warandi yawakabata pachigadzirwa. Mune zviitiko apo zvinhu zvinodzoserwa uye pasina mhosho ikawanikwa panenge paine mubhadharo wekuwongorora uye kudzosa kwechinhu chisina kukanganisa, mari iyi ichave mukufunga kwechikwata chedu chekudzoka.
ZVIMWE ZVINOSANGANISWA - Panofanirwa kutarisirwa zvisina kukodzera nechinhu uye mari yekugadzirisa ichidikanwa, muripo unogona kushandiswa zvichibva paNetwork-Radios.com Vatengi Vashandi uye kuongorora kwevagadziri. Kana mutengi akasabvumirana neongororo iyi zvinogona kuve nenzvimbo yakazvimiririra yebasa inoongorora kudzoka kwako. Kana zvabuda muongororo iyi zvikaenzana nemugadziri ipapo mari dzese dzakabatana dzinozotumirwa kumutengi. Kuramba kubhadhara mari idzi mukati memazuva gumi nemana kunogona kukonzera kuti mugadziri arase chinhu chako.
DZIDZISA DZIDZO DZOKUDZIDZA: Kana Mutengi akafunga kudzosera pasuru yavo nenzira dzavowo, kudzoserwa kwemubhadharo hakupfuure mari yepasipo yekuendesa inodikanwa nebasa rekuvimbika repasuru kudzosera chinhu kwatiri. Chero sevhisi inoshandiswa pamusoro uye pamusoro peyakajairwa muyero haifukidzwe pasi pemutemo uyu. Uchapupu hwekutumira hunodikanwa. Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti Network-Radios.com Vatengi Vashandi vanobvunzwa pasati pabhadharwa mari. Mari dzese dzekupositi dzinofanirwa kubvumiranwa neNetwork-Radios.com Customer Service Team, mukunyora, isati yadzoka.
4.4 KUDZOKERA KUNYIKA
Zvese Network-Radios.com zvinhu zvakafukidzwa nemugadziri warandi. Kana muchiitiko chisingafungidzike zvinhu zvako zvikaita chikanganiso ndapota bata nyika yako yekutsigira chigadzirwa kutanga. Nekudaro kana pasina rutsigiro rwunopihwa saka zvinhu zvinofanirwa kudzoserwa kuNetwork-Radios.com mukati menguva yewarandi pamutengo wevatengi.
4.5 DZIDZA PAMUSORO PAKUDZIDZISWA KWAKANAKA
Paunodzosera chigadzirwa, isu tichagadzirisa yako yekudzosera nekukurumidza sezvazvinogona uye toita zvatinogona kuona kuti izvi zviri mukati memazuva manomwe ekushanda kubva apo patinogamuchira uye kuongorora chinhu. Paunodzorera chigadzirwa chawakatenga uchishandisa kiredhiti kadhi, iro iro kadhi rawakashandisa richapihwa mari yekudzoserwa. Kana iwe uchishuva kudzorera chinhu, ndapota nyorera yedu Vatengi Services timu kuburikidza info@Network-Radios.com
Zvese zvinodzoserwa zviri pasi pemubhadharo wekudzoreredza unosvika gumi neshanu%, kunze kwekunge dhipatimendi rehunyanzvi rizovazivisa seDOA, kana nekanganiso yekugadzira
4.6 KUDZIDZISA ZVAKANAKA KUNETWORK-RADIOS.COM (KUSVIRA)
Kana vatengi vari kutumira zvinhu kuNetwork-Radios.com, mutoro wepakeji unosara nemutengi kusvika poindi yekutarisa, izvi zviri mushure mekutakura, tinokurudzira kuti zvinhu zvese zvakatumirwa kuNetwork-Radios.com zvinotumirwa uchishandisa zvakanyorwa uye inishuwarenzi fomu yekutumira; Chero kurasikirwa kwenyama / kwemari hakuzovharwa neNetwork-Radios.com. Zvinhu zvakakanganisika munzira yekuenda kuNetwork-Radios.com uchave mutoro wevatengi uye zvese zvinodiwa kudhara zvichave pane Sender / Mutengi
5 KUKUDZIRIRA / KODZIDZO KODZERO
Promotional / Rebate kodhi zvinongoshanda online uye zvinoda kuiswa mukati mekutora nzira kuti uwane dhisikaundi.
Kodhi dzekusimudzira hadzigone kushandiswa pamwe chete nechero zvipi zvinangwa zvekusimudzira
KUTONGA / CHIVI
Nepo isu tichashandisa zvine musoro kuedza kuona chokwadi chechero ruzivo rwatinoisa paWebhusaiti kana kukupa kwauri, Hatiite waranti, ingave yekutaura kana kurehwa maererano nekururama kwayo.Mifananidzo: Zvigadzirwa zvemifananidzo ndezvekuenzanisira chete uye zvinogona kusiyana. kubva pachigadzirwa chaicho. Isu tinochengeta kodzero yekudzosa chero zvinhu zvisina kubhadharwa zvizere uye invoice mutengi kune chero zviri pamutemo, kuendesa uye kudzoreredza (15%) mutengo wakaitika. Ese matrademarks akaburitswa zvinhu zvemakambani avo. Network-Radios.com ine kodzero yekukanzura maodha kwatinoona kurongeka kuve kwechitsotsi uyezve uko kuendeswa kwezvigadzirwa kungasazadziswe. Mumamiriro ezvinhu akadaro mari yakazara ichapiwa. Chibvumirano ichi chinotongwa neMutemo weEstonia uye Iwe uye tinozviisa pasi pekutonga kusiri kwega kwematare eEstonia. Zvinhu zvatisingagoni kudzora. Kana isu tisingakwanisi kupa Sevhisi iyi nekuda kwechimwe chinhu chatisinga kwanise kuita sekutadza kwehunyanzvi, mheni, mafashama, kana mamiriro ekunze akanyanya, moto kana kuputika, kusagadzikana kwevagari vemo, hondo, kana mashandiro echiuto, zvechisikigo kana zvemuno, chero chinhu chakaitwa hurumende kana mamwe masimba ane masimba kana kukakavara kwemaindasitiri kwechero rudzi (kungava kana kusabatanidza vashandi vedu), Hatingavi nemhosva yeizvi. Kana ruzivo rwemushandisi rwakagovaniswa neNetwork-Radios.com kana chero yeVashandi vedu, tinochengeta kodzero yekushandisa ruzivo rwako kugonesa Network-Radios.com kuwana uye/kana kupa ruzivo rwekuwedzera nemasevhisi, izvi zvinogona kunge zviri zvehuwandu zvikonzero, semuenzaniso, asi zvisingaganhurirwe kune, Tenga Mhinduro, Dziviriro yeRevenue uye Kubatsira neKuendesa. Ruzivo rwako harungatengeswi kana kushandiswa zvisina kufanira. Nekushandisa iyo Network-Radios.com webhusaiti kana chero yedu Subsidiaries unobvumirana nekugovana data uku. Kana imwe yemitemo nemamiriro ezvinhu zvichionekwa sezvisingagoneki mumatare edzimhosva ipapo chikamu chakakodzera chichabviswa kubva pamitemo yekutengesa uye kuvimbika kwemitemo yakasara ichasimbiswa.
5. KUCHINJA KWAZVO NETWORK-RADIOS.COM
Network-Radios.com inochengetera kodzero yekugadzirisa kana kushandura kune mazwi & mamiriro ekutengesa, zvinhu zvinomiririrwa pawebhusaiti yedu, marongero kana chero chinhu chebasa redu. Vatengi vanozoiswa pasi pematemu ekutengesa kusvika pakuisa odha chete uye shanduko dzinongoshanda chete kune Vatengi vanotenga mushure mekugadziriswa kwese kwaitwa. Zvemukati zvinoratidzwa paNetwork-Radios.com webhusaiti inoitwa saizvozvo nemvumo yemusiki uye inogona kunge isingateedzerwe kana kuratidzwa pasina mvumo yeNetwork-Radios.com .Iwe unofanirwa here kuva nechero mhinduro maererano nenyaya dziri pawebhusaiti yedu, ne edu mamiriro uye mamiriro, sevhisi yedu kana kungoita general mubvunzo saka ndapota usazeza kutibata nesu kuburikidza info@Network-Radios.com
Foni + 351962422996 (Yemunharaunda Rate) 10am - 5.00pm GMT.
Network-Radios.com inoshandisa nzira yakanaka yekunyunyuta uye kushandisa ruzivo rwevashandi vedu uye hunyanzvi hweVatengi vedu uye / kana Vagadziri isu tinoedza kugadzirisa zvichemo zvese nenzira kwayo uye nekukurumidza. Isu tinotsvaga kutungamira kubva kuKutengesa Maitiro uye mamwe masimba anotsigira kana tichiedza kugadzirisa chero gakava. Ndokumbira kuti utibate isu kukwidza chichemo chako kuburikidza neemail: info@Network-Radios.com kana kuburikidza nepositi kukero iri pazasi -
Mazikeen OÜ, muridzi wetiweki-radios.com anotora chikamu muAmazon Services LLC Associates Chirongwa, yakabatana advertising chirongwa chakagadzirirwa kupa nzira yemasaiti kuwana mari yekushambadzira nekushambadzira uye kubatanidza kune Amazon zvivakwa zvinosanganisira, asi zvisingagumire, amazon. .com, endless.com, myhabit.com, smallparts.com, or amazonwireless.com. Izvi zvinoreva kuti zvimwe zvezvigadzirwa zvakanyorwa zvinogona kutengeswa zvakananga kubva kuAmazon. Izvo zvigadzirwa zvinoratidzwa zvakajeka se "Tenga kubva kuAmazon".
DMR Nhepfenyuro (11)
Network maRadio (33)